Ngwaahịa bụ isi - Yangzhou qiangjing ngwaahịa egwuregwu Co., Ltd.
Nkwado akwa na-agbanwe agbanwe ma na-eku ume, na-enye nchedo na ọgwụgwọ zuru oke maka mgbu nke ọrịa akwara lumbar na-ebute. Supportdị nkwado ukwu a dị mma na ahụ. Ee, ị nwere ike iji nkwado siri ike nke ukwu iji kpuchido okirikiri lumbar. Ma maka oke ibu, ọsụsọ slimming waist trimmer bụ nhọrọ kachasị mma. Nyere gị aka ịsụcha obere oge na -ewe nnukwu nri. Enwekwara ọgwụ ike ndọta, enwere ike ịhọrọ ihe nkwado na ihe ndị ọzọ na-akwado nkwado anụ ahụ dịka ọnọdụ gị dị.
Ihe nkwado ikpere nwere ọrụ atọ dị mkpa: braking, ichebe okpomọkụ, yana nlekọta ahụike.
Nkwonkwo ikpere na-eme dị ka kwushin ikesa ibu. Mmega ahụ na-enwe oke nrụgide na ikpere, nke nwere ike ibute ọrịa na nkwonkwo ikpere. Site na nkwado ikpere, enwere ike idozi patella n'ọnọdụ kwụsiri ike iji hụ na adịghị mfe mmerụ ahụ. Ọ bụrụ na nkwonkwo ikpere merụrụ ahụ, iji akwa pịrị apị pịrị apị nwere ike belata mgbatị ikpere ma belata mgbatị ikpere, si otú ahụ na-echebe nkwonkwo ikpere ahụ ka ọ ghara ịkawanye njọ.
Nkwonkwo ikpere na-emebi emebi n’oge udu mmiri. You nwere ike iji akwa ikpere mee ka ikpere gị wee na-ekpo ọkụ ma jide n'aka na ọbara na -emere gị ikpere na ikpere. Ndị okenye na-eyi ha n'oge oyi iji chebe ikpere ha site na ọrịa ogbu na nkwonkwo. Adrapado uwe ogologo oge nwere ike igbochi rheumatism. Ngalaba ọrịa
N'egwuregwu, n'ihi ọnọdụ dị iche iche, ọ dị mfe ịme ọtụtụ mmerụ ahụ ma ọ bụ ụdị nsogbu na
nkwonkwo ikpere. Mbọchi ikpere dabara ikpere iji mee ka ikpere dị jụụ n’oge a na-emega ahụ ma belata mgbu ikpere. Mbelata ikpere anyị na-ewepụta nwere ike ikesasị mgbakasị ahụ nrụgide dị na ikpere na-ebelata ohere enwere mmerụ egwuregwu.
Nyere aka gbaa abụba, na-emega ahụ ruo nkeji 10, ọsụsọ ruo ọkara otu awa, kwalite arụmọrụ ọkụ abụba, mmega ahụ ngwa ngwa rue ukwu dị gịrịgịrị.
Jiri roba neoprene mee n'ime, na-eme ihe mmega ahụ nwere ike ịnakọta ikpo ọkụ nke ọma, mana ị gaghị ata ahụhụ.
Na-eweghachi akwara anụ ahụ, na-eme ka umeji akwara pụta, na-ebelata ike ọgwụgwụ, ọ nwere ike ichebe olu na ukwu, ma nwee ike nweta nsonaazụ nke ịchekwa mmanụ ma na-akpụzi ngwa ngwa.
Nkwonkwo aka aka nwere oke mmetụta n'ibelata ọzịza, ichebe akụkụ merụrụ ahụ, ma kwe ka akụkụ ahụ merụrụ ahụ gbakee. N'otu oge, mkpịsị aka aka nwere ike belata nsonaazụ nke nkwojiaka mgbe ị na-egwu egwuregwu. Ndị na-egwu egwuregwu nwere ume dị ala na-ahọrọkarị ihe eji echebe mmadụ. Iji belata nsonaazụ nke raketị na nkwojiaka na ogwe aka, enwere ike iji eriri dị nro ma tinye mgbakwunye raketị ahụ. Ọ na-egbochi ihie ụzọ nkwonkwo aka ma na-akwalite mgbasa ọbara. Aringbụ ọkpọ aka nwere ike belata nrụgide nke aka na aka ma ọ bụ nwee nnukwu mmetụta iji zere mmerụ ahụ. Ọ nwere ọrụ nke igbochi akwara na mbufụt
Meziwanye ọnọdụ na-adịghị mma, ọrụ Sedentary, Joint sprains, nchebe mmega GYM